Top 10 Amin’ireo Fakàn-tahana ny ‘Gangnam Style’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Novambra 2012 1:31 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 日本語, Português, বাংলা, Español, Nederlands, Aymara, English
Ny lahatsary manintona ny saina sy fomba fandihy mitapitapin'ilay Koreana Tatsimo mpiangaly gadona rap ‘Gangnam Style‘ dia nahazo mpitsidika 630 tapitrisa tao amin'ny YouTube hatramin'ny anio (3 Novambra 2012) ary namotika ny zava-bita tsara indrindran'ny “Guinness World record” ho an'ireo lahatsary be “mpitia” indrindra teo amin'ny tantaran'ny YouTube.
Iray amin'ireo mpandihy farany ny Gangnam ilay Sinoa mpanakanto/mpitolona malaza, Ai Weiwei. Lasa lohateny vaventy i Ai Weiwei niseho tamin'ity lahatsary ity niaraka taminà lobaka mavokely ary nandihy nisary gaigy saingy tamin'ny fomba fandihy nahavariana toa “mitaingin-tsoavaly”. Saingy tsy adinony ny nampita ny hafany mikasika ny sivana tamin'ny fitondràny rojo vy sy nanovàny ny lohatenin'ilay lahatsary ho “Grass Mud Horse” (eto jerena ny fanazavàna, amin'ny teny Anglisy)
Miaraka amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena efa manangasanga ao Etazonia, novokarin'i College Humor ity lahatsary ity. Ny mpaka tàhaka ilay mpirotsaka ho filoham-pirenena avy amin'ny Repoblikana, Mitt Romney dia nanao “rap” sy nandihy ao anatin'ilay lahatsary, maneso ny lazan'i Romney ho tahaka ny bandy mpanankarena tsy azo kitikitihana sy miaina fiaina ‘snob’.
Ny Tobim-Paritra Famonjàna sy Fanarenana ao Cebu dia fantatra amin'ny fampiasàna tsy tapaka ny dihy mirindra mba ho fomba famerenana ireo mpifonja ho eny anaty fiarahamonina indray. Jereo anie ity seho mahavariana iarahan'ireo mpifonja marobe mitafy akanjo tohitenany mivolom-boasary sy miara-mitsinjaka ity e!
Tahaka ny tsy mitera-doza ny mifaly sy misary gaigy, saingy tsy amin'ny toerana sasany kosa, indrindra fa any amin'ny toeram-piasanao. Taorian'ny nampakaran'ny andianà mpamonjy aina ao El Monte, California, ity fakàn-tahaka ny “Gangnam Style” ity, miseho miaraka amin'ny fanamiany tao anaty dobo filomanosana, olona 14 no voaroaka. Psy, ilay K-Pop malaza, izy tenany mihitsy no nijoro niaro azy ireo mba hiverenan-dry zareo tamin'ny asany. Tsy ela akory dia nifidy ny tanàna fa handray indray ireo mpamonjy aina ireo.
Tanaty tafatafa dia nolazainy fa nahita andianà mpitsoka mozika iray “nampihetsi-po” izy, ilazany an'ity lahatsary novokarin'ny mpitsoka mozikan'ny Anjerimanontolon'i Ohio ity.
Lahatsary fakàn-tahaka ny “Gangnam Style” avy amin'ny M.I.T no niparitaka be manasongadina iray amin'ireo mpahay momba ny teny sy mafàna fo eto an-tany, Noam Chomsky.
Andianà tantsambo avy amin'ny U.S. Naval Academy no nihira ny hiran'i Psy sady niara-nitsinjaka miaraka amin'ny fanamiany fotsy. Tsy tahaka ireo mpamonjy aina izay niharan'ny fandroahana, ireto mpiofana ho tantsambo Navy ireto dia voalaza fa nahazo fankatoavana avy amin'ny Navy.